❤️ Instagram တွင် ဇာတ်လမ်းထည့်နည်း - Winches ကလပ်
အခုချိန်အထိ, Instagram Story တစ်ခုကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုအတိအကျစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေရှိနေသေးတယ်. မင်းရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကိုခဏလေးတင်ပြီးရင်, မင်းရဲ့ပရိုဖိုင်ပုံမှာ + ကိုနှိပ်ပြီးမင်းဇာတ်လမ်းမှာဓာတ်ပုံ (သို့) ဗွီဒီယိုအတိုလေးထည့်နိုင်တယ်.
ဒါပေမယ့်မင်းဒါကိုပြီးပြီ, + ပျောက်သည်. အခြားဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေချင်တဲ့အခါမင်းဘာလုပ်မလဲ ?
Instagram update အသစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ဒီပြဿနာကိုအတော်လေးဖြေရှင်းပြီးပါပြီ. ဇာတ်လမ်းတစ်ခုထုတ်ဝေရန်ယခုပိုမိုလွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိလာသည်, နှင့်အဓိကနည်းလမ်းသုံးခုရှိသည်:
အထက်ပါပုံအတိုင်း + သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ – ဇာတ်လမ်းအသစ်အတွက်သာဖြစ်နိုင်သည်
Instagram သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုသိသာထင်ရှားစွာအသိအမှတ်ပြုသည်, အထူးသဖြင့်မရှိသူများ ၀ ါသနာပါသူများ, ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမှုကိုခံစားခဲ့ရသည်. သင်နည်းလမ်းတစ်ခုစီကိုခြုံငုံသုံးသပ်လိုလျှင်, အောက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏သုံးပိုင်းလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ.
ပရိုဖိုင်ပုံမှ Instagram ဇာတ်လမ်း
၎င်းသည်အမြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တင်ရန်အလွန်ကောင်းသည်, ဒါပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်းသင်အရင်ကသတင်းတစ်ပုဒ်မတင်ခဲ့ရင်အဲဒါကသာအလုပ်လုပ်ပါတယ်. မင်းရဲ့ feed ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ profile page ကနေဒီနည်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်.
သင်၏သင်္ကေတပုံကို + သင်္ကေတဖြင့်တို့ပါ.
ထို့နောက်သင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (သို့) ဗွီဒီယိုတစ်ခုရိုက်နိုင်သလိုအသစ်တစ်ခုတင်နိုင်သည်။.
ဒါဟာအမြဲတမ်းဝိသေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်မင်းမသိတာရှိရင်, သူမသည်ရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်.
၎င်းကိုသင်၏ feed ထဲသို့ချက်ချင်းဆွဲယူပါ.
ညာဘက်ထိပ်ရှိကင်မရာကို နှိပ်၍ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တင်ပါ
ဒါက Instagram အတွက်သတင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတွေဟာဇာတ်လမ်းကိုပိုသိလွယ်တဲ့နည်းနဲ့တင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။. မင်းရဲ့ပို့စ်ကနေဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်.
အသုံးပြုရန်ပုံ (သို့) ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးပါ.
စာရင်းရှိနောက်ဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခု၏အားသာချက်မှာသင်၏ဇာတ်လမ်းသို့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံ (သို့) ဗွီဒီယိုတစ်ခုထည့်ရန်၎င်းတို့ကိုသုံးနိုင်သည်, မင်းထုတ်ဝေပြီးပြီဆိုရင်တောင်. မင်းမှာတိုက်ရိုက် Instagram ဇာတ်လမ်းရှိရင်မင်းပထမနည်းလမ်းကအလုပ်မလုပ်ဘူး.
အကောင်းဆုံး Instagram ကြီးထွားမှုတူးလ်
Instagram ကငါ့ကိုဝင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး : ပြုပြင်လမ်းညွှန်
၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံး Instagram Bots တွေကဘာတွေလဲ၊ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထားလဲ?
Instagram တွင် Influencers များအားမည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း
Instagram ကိုအလိုအလျောက် Like လုပ်ပါ: အလိုအလျောက်နှစ်သက်မှုအတွက် Bot
ယခင်ဆောင်းပါးInstagram တွင်တင်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်မည်သည့်အချိန်ဖြစ်သည် ?
နောက်ဆောင်းပါး၂၀၂၀ မှာအကောင်းဆုံး Instagram Bots တွေကဘာတွေလဲ၊ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ထားလဲ?
Instagram တွင် Link တစ်ခုမျှဝေနည်း : 2022 သို့3နည်းလမ်း
Instagram မှာ စပွန်ဆာဘယ်လိုရယူမလဲ။ : အသေးစားအကောင့်များအတွက်လမ်းညွှန်
© မူပိုင်ခွင့် - WinchesClub.com ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ